सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कम्पनीले बढायो खसीको मूल्य, प्रतिकेजी कति ? – ramechhapkhabar.com
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कम्पनीले बढायो खसीको मूल्य, प्रतिकेजी कति ?
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खसीबोकाको मूल्य बढेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकेजीमा ९० रुपैयाँसम्म बढेको छ । कम्पनीको काठमाडौंमा बिक्री वितरण गर्न दाङ र हेटौंडामा खसीबोका खरिद गत वर्षभन्दा महँगो परेको जनाएको छ ।
सोही अनुसार यो वर्ष जिउँदो खसीबोकाको मासुको मूल्य बढेको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नै गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिउँदो खसीबोकाको मूल्य ९० रुपैयाँ माथि मूल्य तोकेको हो ।
कम्पनीको अनुसार जिउँदो खसीको मासुको मूल्य प्रतिकेजी ६५० रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्पनीले हिजो सार्वजनिक गरेको मूल्य भन्दा १० रुपैयाँ कम अर्थात दश रुपैयाँ सहुलियत दिएर प्रतिकोलो ६४० रुपैयाँमा जिउँदो खसीको मासु बिक्री गर्ने बताइएको छ ।
खाद्यले गत वर्ष जिउँदो खसीबोकाको मासु प्रतितोलो ५६० रुपैयाँ तोकेको थियो । यसअनुसार प्रतिकिलो दश रुपैयाँ सहुलियत दिएर ५५० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रतिकेजी ९० रुपैयाँले खसीको मासु महङ्गो भएको हो ।
च्याङ्ग्रा ल्याउने निर्णयबाट खाद्य व्यापार कम्पनी पछि हट्दा उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको मार
काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खसीबोकाको मूल्य बढेको जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीका अनुसार दाङमा नै २५ केजीदेखि माथिका खसीको मूल्य प्रतिकिलो ५६५ रुपैयाँर २० देखि २५ केजीका खसी प्रतिकेजी ५५०, बोकाको ५४५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सो स्थानबाट काठमाण्डौं ल्याउँदा थप महङ्गो भएको हो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंमा बिक्रीका लागि काठमाण्डौं ल्याउने २ हजार खसीबोकामध्ये शुक्रबार बेलुकासम्म हेटौँडा र दाङका किसानबाट ७३० वटा खसीबोका उपत्यका ल्याइसकेको छ ।
सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार बिहीबार दाङबाट २२९ र हेटौंडाबाट हिँडाइएको ३०२ गरी तीन वटा ट्रकबाट शुक्रबार बिहान ५३१ खसीबोका काठमाडौं आईपुगेको हो । थप १९९ वटा खसीबोका शुक्रबार साँझ आइपुगेको हो ।
कम्पनीले ल्याउने भनिएको२ हजार खसीबोका ल्याउने काम जारी रहेको बताउँदै आवश्यकता र माग अनुसार खसीबोका ल्याइने उनले जानकारी दिइन् । आजको अर्थ